वेल्स् जांदै हुनुहुन्छ ? लायन किज ले थप्नेछ रोमाण्टिक क्षण | We Nepali
वेल्स् जांदै हुनुहुन्छ ? लायन किज ले थप्नेछ रोमाण्टिक क्षण
वीनेपाली | २०७२ चैत २० गते १४:३६
लन्डन । समरले शुरुवातको संकेत दिइरहंदा यदि तपाईंहरु वेल्स् स्कन्डभेल वा त्यताको अन्य रमणीय क्षेत्रतिर होलिडे जाने सोच्नु भएको छ भने तपाईंलाई थप रोमाञ्चक क्षण दिलाउनेछ ‘लायन किज् होटल एण्ड स्पा’ ले ।
प्राकृतिक सौन्दर्यता र बेलायती सम्पदाको चिनारी दिने क्षेत्र स्रोपसायरमा सञ्चालित छ ‘लायन किज् होटल एण्ड स्पा’ । त्यहांबाट अढाइ घण्टा ड्राइभमा कार्डिफ र ३ घण्टामा स्कन्डभेल आश्रम पुगिन्छ । लन्डनबाट नियमित ड्राइभ गर्दा हुने थकान यही बास बसेर स्पाको आनन्द लिंदा सबै मेटिने वेल्स् मा नर्सिङ होम सञ्चालन गरिरहेका वी पी खनाल बताउंछन् ।
होटलबाट ३० मिनेट हिंडेपछि यूनेस्कोको विश्व सम्पदा सूचीमा रहेको चिर्क क्षेत्र पुगिन्छ । ८८ माइल कभर गर्ने ल्याङगोलेन कनालको किनारमा अवस्थित उक्त होटल एण्ड स्पामा समय बिताउन स्वर्गीय आनन्द लाग्छ । ल्याङगोलेन कनालको ११ माइल दुरी यूनेस्कोको विश्व सम्पदा सूचीमा छ ।
८२ कोठा भएको चार तारे उक्त होटलमा वाटरसाइड रेष्टुरेन्ट, विशेष सुविधासहितका डबल, ट्वीन र सिंगल रुम, स्पा साथै जिम सेवा उपलव्ध छन् ।
‘होलिडे भनेको केवल लामो यात्रा तय गरेर कहीं गन्तव्य पुग्नुमात्र होइन, यसले विलासिता, आराम र स्मृतिमा केही रोमाञ्चक क्षण कैद गर्न सक्नुपर्छ’, सञ्चालक डा. अशोक बन्सल भन्छन् । उनले नेपाली ग्राहकलाई विशेष सहुलियत दिइने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका छन् ।
बन्सल नेपाली समुदायसंग निकट छन् यतिखेर । उनी ह्यारीको नेपाल भ्रमणताका ब्रिटेन नेपाल चेम्बर अफ कमर्सको विजनेश डेलिगेसनमा पनि सामेल थिए जहां बेलायती र नेपाली व्यवसायी गरि दर्जनको सहभागिता थियो ।
लायन किज् पहिला लायन इन पबका रुपमा सञ्चालित थियो । त्यसका मालिकले छाडेपछि त्यसै खेर गइरहेको जमिन सदुपयोग गर्ने सोचले सन् २००४ डिसेम्बरमा अर्को व्यापारिक समूहले होटल शुरु गरेको हो । त्यही स्थानमा वाटर साइड नामक रेष्टुरेन्ट चलाएको वर्षदिनपछि खुलेको थियो होटल । सन् २००८ देखि भने यहां होटलसहित कन्ट्री क्लब (खेलकुद क्लव) जिम र स्पामा विस्तार गरिएको हो ।